कोरोना देखा पर्न कति दिन लाग्छ ? कस्ता लक्षण देखिन्छन् ? जानी राखौ – Narayani Dainik
कोरोना देखा पर्न कति दिन लाग्छ ? कस्ता लक्षण देखिन्छन् ? जानी राखौ
कोरोना भाइरस धेरै चुनौतीपूर्ण छ किनकि कसैले पनि यसको लक्षणहरुलाई सजिलैसँग बुझ्न सक्दैन। कोविड-१९ को लक्षण सामान्य चिसो जस्तै मिल्दोजुल्दो छ। जे होस्, यदि तपाई बिरामीको बिग्रिएको अवस्थालाई नजिकबाट हेर्न थाल्नु भयो भने, यो पहिचान गर्न सकिन्छ।
हामी तपाईंलाई कोरोना भाइरसका प्राथमिक लक्षणहरू के हुन् र कसरी यो बढिरहन्छ भनेर बताउँछौं।
पहिलो दिन– बिरामीलाई उच्च ज्वरो लाग्न थाल्छ र उसको शरीरको तापक्रम धेरै बढ्छ। यस बाहेक, बिरामीलाई पनि सुक्खा खोकी र चिसो लाग्न थाल्छ। केही दिन भित्र, बिरामीको मांसपेशी दुख्न थाल्छ र संयुक्त पीडा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ। घाँटीको बढ्दो सुजन धेरै केसहरूमा पनि देखिएको छ।
पाँचौं दिन– पाँचौं दिन मानिसहरूले सास फेर्ने समस्याहरू गर्न थाल्छन्। विशेष गरी बुढेसकालमा यो समस्या अधिक देखिएको छ। यस बाहेक, जो मानिसहरू पहिले नै केही रोगसँग संघर्ष गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई पनि यी समस्याहरू छन्।
सातौं दिन – सातौं दिनसम्म, बिरामीले महसुस गर्न थाल्छ कि अब उसलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्छ। वुहान अस्पतालको एक रिपोर्ट अनुसार धेरैजसो बिरामीहरूले डाक्टरलाई यति धेरै दिन बितिसकेपछि खबर गरेका छन्।
आठौ दिन– करीव एक हप्ता बितेपछि, मानिसहरूलाई श्वासप्रश्वासको समस्या सिन्ड्रोम सम्बन्धी समस्या हुन थाल्छ। यो त्यस्तो समय हो जब मानव फोक्सोमा बलगम तीव्र रूपमा बढ्न थाल्छ।
फोक्सोमा अक्सिजनको ठाउँमा बलगम बढेको कारण बिरामीले सास फेर्न थाल्छ। उसको छाती दुखाइ पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ।
यसले कोरोना भाइरस देखा पर्न २ देखि १० दिन लिन सक्दछ। भाइरसको ढिलाइ देखा पर्दा, व्यक्ति बाहिरबाट बिरामी हुँदैनन्, जसका कारण संक्रमण मानिसहरूमा सजिलै फैलिन्छ।
हेरविचार कसरी गर्ने?
कुराना भाइरसबाट बच्न सरसफाइ गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको वरपर सफाईको पूरा ध्यान राख्नुहोस्। खोकी खाँदा मुखमा टिश्यु राख्नुहोस्।
साथै, समय समयमा साबुनले हात धुनुहोस्। डब्ल्यूएचओ अनुसार, एक व्यक्ति कम्तिमा २० सेकेन्ड को लागी हात धुनु पर्छ।
आजतकको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री
विश्वविद्यालय छात्रावासमा रहेका विद्यार्थीहरूका लागि खाद्य सामाग्री वितरण
कोरोना कसरी रोक्न? भारतीय प्रधानमन्त्रीले आज सबै मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्दै